samsung သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပထမဆုံးဆဲလ်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်ကိုသင်သိပါသလား။
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ Samsung ကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပထမဆုံးဆဲလ်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား။
Samsung & apos ၏မိုဘိုင်းဖုန်းအစုစုတွင်မော်ဒယ်တစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီးအခြေခံဟန်းဆက်များနှင့်အိတ်ဆောင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် feature ဖုန်းများမှသည်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ Galaxy စမတ်ဖုန်းများအထိဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြနေသည့်ဖုန်းများသည်စမတ်ကျသည်။ သို့သော်သူတို့၏ထူးခြားမှုကနေအောက်ရှိအစက်အပြောက်တစ်ခုနှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုထင်ရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Samsung သည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းကို Samsung Guru E1107 ဟုလူသိများပြီး၎င်း၏နောက်ကျောပြားတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်တစ်ခုပါရှိသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့သောအခါဆဲလ်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးပြီးဖုန်းအားပြန်သွင်းပေးသည်။ သို့သော်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်သည်စွမ်းအင်များစွာကိုမပေးနိုင်ပါ။ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ကြာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်လိုအပ်သောအားသွင်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖုန်းသည်တစ်နာရီလျှင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူခဲ့သည်။ နေရောင်ခြည်အားသွင်းစနစ်သည်ဖုန်းကိုရည်ရွယ်သည့်စျေးကွက်များအရအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက်များနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေသောဒေသများရှိစားသုံးသူများအတွက်ဟန်းဆက်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
Samsung Blue Earth Guru E1107 သည် Samsung ပြုလုပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရောင်ခြည်ဆဲလ်ဖုန်းမဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏နောက်ဖက်တွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်တစ်ခုပါရှိသည့် Samsung Blue Earth ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် - တစ်နာရီနေရောင်ခြည်ကိုနောက်ထပ်မိနစ် ၁၀ စကားပြောဆိုမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Guru နှင့်မတူသည်မှာ Samsung Blue Earth သည်ဝက်ဘ်၊ YouTube နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များကဲ့သို့အဆင့်မြင့်သောစွမ်းဆောင်ချက်အနည်းငယ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ GPS ရေဒီယိုကတည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်၎င်းသည် Wi-Fi သို့မဟုတ် 3G ဖြင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Eco-friendly ထုတ်ကုန်အဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ ဖုန်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုကတ်ထူပြားအောက်တွင်ရပ်တည်ချက်အဖြစ်နှစ်ဆတိုးလာသည်။
Samsung သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခြားစမတ်ဖုန်းများတွင်ထပ်မံကြိုးစားသင့်သလား နေရောင်ခြည်အားသွင်းစက် အစား? ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
ကိုးကားချက်များ: Samsung , လူနေအိမ်
pixel မှ pixel သို့ data တွေကိုလွှဲပြောင်း
t-mobile galaxy s20
AT&T သည် T-Mobile ၏စတိုးဆိုင်ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကံဆိုးသောစာမျက်နှာကိုထုတ်သည်
Apple ၏နောက်ဆုံးတီဗီကြော်ငြာတွင် App Tracking Transparency feature သည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြသသည်
Cloud နှင့် external SSD / HDD သိုလှောင်မှု - သင်၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်
ဘက်ထရီကို iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
ကျောရိုးကြံ့ခိုင်၊ ၎င်းသည် Ceramic White နှင့် Ceramic Black ရှိ Galaxy S10 + ဖြစ်သည်။
Galaxy S21 လိုင်းသည် Samsung Pay ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည်
Apple iPhone5တွင်မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးလုံးနှင့် HD အသံအထောက်အပံ့များပါရှိသည်။ ၎င်းတွင်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်